UMTHI UJONGE IITHAYILE ZAPHANSI (IINGCAMANGO ZOYILO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Umthi ujonge iithayile zaphansi (Iingcamango zoyilo)
Umthi ujonge iithayile zaphansi (Iingcamango zoyilo)
Apha ngezantsi siphonononga uyilo lwangaphakathi ngomthi ujonga umgangatho wethayile kubandakanya i-pros yayo kunye neengozi zayo, eyona ndlela ibalaseleyo yokubeka iiplanga zethayile kunye nemibono ethandwayo yoyilo.
Ukuba ufuna ukubonakala komgangatho weplanga ekhayeni lakho ngaphandle kweendleko kunye nemicimbi yolondolozo, ukhuni jonga iithayile lukhetho oluthandwayo. Iiplanga ezijongwa njengeplanga ziza njenge Iileyili zeceramic okanye ze-porcelain kwaye zihlala zibume beeplanga, njengokhuni lokwenyani. Izibonelelo eziphambili zezi ntlobo zethayile kukuhlala kwazo kunye neendleko.
Abanini bamakhaya bahlala bebuza ukuba ingaba umgangatho okhuni okanye iithayile ze-porcelain ezibonakala ngathi zingcono kunento yokwenyani. Lo mbuzo ubeka umceli mngeni kuba kukho ubuhle kunye neengozi kukhetho ngalunye kwaye kuxhomekeke kukhetho lomninikhaya.
Zimbini izinto eziphambili ze wokhuni oluqinileyo Olukhuni oluqinileyo kwaye umthi onzima wobunjineli . Umthi oqinileyo ngumthi oqinileyo uhlala u-¾ kwaye uqinile kuyo yonke indlela. Kwelinye icala, ukutyibilika komthi onzima kwenziwa ngamatye alaminethiweyo kunye apho kuluhlu oluphezulu kukho umthi okhuni.
Ngelixa, iithayile ze-porcelain zenziwa ngokudityaniswa kodongwe okwenza ukuba luxinane. I-Porcelain iqiniswe ngokupheleleyo kwaye inokungatyiswa okanye icwecwe. Iithayile zeporcelain zincinci ngaphandle kweetiles zeceramic. Yeyona ndlela inzima yokubeka umgangatho ngenxa yokuqina kwayo, inqanaba eliphezulu lokufunxwa kwamanzi kunye nokunganyamezeli amabala. Iithayile zeporcelain zixhathise kakhulu ekuchazeni nasekukrelekeni, zisenza ukuba kube bhetele kwiindawo ezivezwe kukugcwala kwabantu njengeepaseji, umgangatho wasekhitshini kunye nolunye usetyenziso lwentengiso.
umtshato uthumele imibono ebusuku
Umthi ujonge iithayile (Iinkonzo kunye neNkcitho)
Umthi ujonge iiTayile Pros
Umthi ujonge iTile Cons
Iindleko zomthi wokujonga i-Porcelain Tile
Eyona Ndlela ilungileyo yokubeka iTayile yokuKhangela
Ukuqhelaniswa kweenkuni ezinjengeethayile
Sebenzisa i-Thinset eyiyo
Ubungakanani obuHlangeneyo beGrout
Siqokelele izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zomthi ojongeka njengethayile ukuze sincede kwaye sincede uthathe isigqibo sokuba yeyiphi into oza kuyisebenzisa ekhayeni lakho.
Iindleko -Imithi ejongeka njengethayile ifikeleleka ngakumbi kunemigangatho eqinileyo yomthi oluqinileyo, ikunika ixabiso lemali yakho. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zezitayile, imibala kunye noyilo onokukhetha kuzo ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo kunye nexabiso eliphantsi. Umthi ujonga iithayile uqoqosho ngakumbi. Ngokungafaniyo nomthi oqinileyo, owahlulwe ngokweendidi apho imibala eyahlukeneyo kunye neepateni zinamaxabiso ahlukeneyo.
Ulondolozo olulula -Umthi ujonga iithayile yeyona ilula ukuyigcina icocekile. Ukutshayela rhoqo ngomtshayelo othambileyo kunye nokuvutha kwamaxesha kuya kususa konke ukungcola owomileyo phantsi. Ukucoca okunzulu, ngamanye amaxesha ukukhutshwa ngesepha kunye namanzi afudumeleyo kuya kuqinisekisa ukuba iinkuni zakho zijongeka njengethayile zihlala zikwimeko entle.
Ukuhlala ixesha elide kunye nokungafani -Ngenxa yokuxhathisa kobumanzi kunye nokufuma, iinkuni ezijongeka njengethayile zinokufakwa kuyo nayiphi na indawo yekhaya lakho. Ukujongwa kwethayile yomthi kuhlala ixesha elide kakhulu, ukumelana namanzi kwaye ayikrwabi. Akudingeki ukuba ifakwe kwi-subfloor efana neplywood kwaye ibambelela kwisamente ngokulula.
Ukhuseleko kwindalo esingqongileyo -Kuba ukujongwa kweenkuni kwenziwa ngesanti nodongwe kwaye kutyhileka kubushushu obuphezulu ngexesha lokwenziwa, oko kuthetha ukuba ezi thayile azinazo naziphi na izinto eziyityhefu ezaziwa ngokuba zii-VOCs; ukuyenza ikhuseleke kubanini bamakhaya nakwindalo esingqongileyo. Ngaphezu, ezi iinkuni zijongeka ziithayile xa zilahliwe zinokuphinda zisebenze zibe zizinto eziluncedo.
ibhedi kwigumbi lokuhlala
Izinto ezinobungozi kunye nePet-friendly -Ngenxa yomphezulu wethayile egudileyo, ukubonakala kweenkuni akugcini ukungcola kunye nesilwanyana sasekhaya. Umthi ujonga iithayile ikwanganyangekiyo nezicaphukisayo ezinokubangela ukungabikho komzimba okunje ngomungu kunye nothuli. Wood jonga iithayile lukhetho lobulumko kumgangatho olungele izilwanyana zasekhaya kuba ezi tile azimelani nokukrwela, amanqaku e-scuff kunye nebala.
Ukufakwa -Ukufaka iithayile zokujonga iinkuni kunokubangela umceli mngeni onzima kwaye ke kufuna ukuba ubuchwephesha bokufaka. Ukudibanisa iithowuni zombala kunye nokucwangcisa isiqwenga ngasinye ukwenza imbonakalo yokwenziwa kweenkuni kunokuba nzima kwaye kube nzima ngakumbi kwisifakeli esingenamava.
Intuthuzelo -Umthi ojongwa ngethayile unokubangela ukungonwabi ukuba uchitha iiyure ezininzi umile kuyo. Ezi tile zinokuba nzima kwaye zibande ezinyaweni kwaye aziboneleli nakuphi na ukungaphantsi kweenyawo ngokungafaniyo nemigangatho eqinileyo yomthi okanye ezinye iintlobo zomgangatho.
Ukutyibilika -Umthi ujongeka ngethayile kunye nomphezulu wayo ogudileyo unokutyibilika ukuhamba xa umanzi, ke ngoko kunokuba yingozi. Kububulumko ukukhetha umthi ujonge iithayile ezingashukumiyo okanye iithayile ezinobuso obomileyo obufana noyilo olukrwitshiweyo okanye olwenziwe ngesandla, ezi ntlobo zinokunceda ukuthintela ukutyibilika kunye nokuphucula ukubambeka kwiindawo ezimanzi.
Ngokwesiqhelo, iindleko zeenkuni zijongeka njenge-porcelain tile kuxhomekeka kumgangatho, udidi, ukuhlala ixesha elide, ubukhulu, ubungakanani kwaye kunjalo, uphawu lweethayile. Umgangatho ophezulu weenkuni ujonga iithayile ze-porcelain ziya kubiza malunga ne- $ 6 ukuya kwi-12 yeedola ngeenyawo zekwere. Umthi ujonga iithayile ze-porcelain zingenziwa ngokwezifiso kwaye ixabiso lazo liqala kwi- $ 20 ngenyawo lesikwere kwaye linokubaleka liye phezulu.
Kukwakho neplani ejongeka ngeplasta tile ukusuka kwi $ 3 ukuya kwi-8 yeedola ngeenyawo zekwere, kodwa isitayile kunye nesitokhwe sinokulinganiselwa; kunye noyilo lweenkozo zomthi lunokuba sezantsi kumgangatho. Xa ubala iindleko zeprojekthi yakho yokutyibilika, ungalibali ukongeza malunga neepesenti ezingama-20 zeethayile ezongezelelweyo ukuze ubuyekeze izinto ezilahlekileyo ngexesha lofakelo.
Umthi ujonga ithayile yomelele kwaye kulula ukuyigcina; kwaye ngenxa yesibheno sayo sobuhle iinkuni ezijongeka njengethayile ziye zanda kakhulu kwiminyaka yakutshanje. Ngenxa yazo zonke izibonelelo zayo, iinkuni ezijongeka njengethayile kunokuba ngumceli mngeni omkhulu ukufaka-kwaye yiyo loo nto.
imihombiso yokutyela esesikweni
Iplanga elijongwa ngumthi ASIYO Flat. Banokubonakala ngathi bajongeka ngathi bacaba xa beqala ukuvela, kodwa ukuba ujonga kufutshane, iziko liphezulu kwaye banesithsaba embindini.
Umthi ujonga umgangatho wethayile kunye nephethini ye-offset engahleliwe
Ngokhuni olujongwa njengethayile, ihlala isetyenziselwa ukulinganisa ukufakwa komgangatho oqinileyo womthi. Iphethini ye-Offset yindlela yokufaka eseta iziko (amanqaku aphezulu) etayile ecaleni kweziphelo zeetayile ezilandelayo (amanqaku aphantsi) kwipateni efana nokuluka. Khumbula: Sukuyenza into epheleleyo ngokususa umthi ngethayile yakho yokujonga.
NgokweMigangatho yeSizwe yaseMelika yokuFakwa kweethayile (i-ANSI A108.02 Icandelo 4.3.8), kuyacetyiswa ukuba iithayile mazisuswe zingabikho ngaphezulu kwe-1/3 yethayile-oku kumisela umda kwi-33% ubuninzi iseti. Umzekelo: Kwithayile emide engama-24, elona liphezulu lisisi-8 Ungayibona igalari ye Ubeko lwepateni yethayile Apha.
Xa ufaka iinkuni jonga iithayile, kubaluleke kakhulu ukuba unake ukuqhelaniswa kweethayile. Qala ngokubeka imiqolo emibini yeenkuni njengeethayile kwaye uyibaleke ukusuka kwelinye icala kwegumbi ukuya kwelinye icala. Sebenzisa inkqubo yokulinganisa iithayile kwaye uyibeke nkqo ngaphezulu kweethayile uqiniseke ukuba zicabalele enye kwenye; buyisela iithayile eziphantsi kakhulu okanye eziphezulu.
Umgangatho kufuneka ucwecwe -Ukufaka iinkuni njengethayile kwindawo engalinganiyo kuya kuzisa iingxaki ngakumbi ngakumbi xa iziko leethayile liphezulu. Qinisekisa ukuba iithayile zinokuphakama okuvumelekileyo kwe-1/8 kwiinyawo ezili-10.
Ukuqinisekisa ukufakelwa kweethayile okufanelekileyo kokujonga kusetyenziswa izixhobo ezifanelekileyo kunye nezinto ezifanelekileyo. Ukusebenza ngefomathi enkulu yefomathi, sebenzisa udaka oluphakathi kunye ne-x ½ notch trowel, oku kuyakwenza ukufakwa kweenkuni zakho kubonakale kulula.
Cinga ubungakanani bomdibaniso wakho we-grout, ukuba useta i-grout ngokudibeneyo iya kwenza ukuba ukhuni lube njengephepha lephepha elibonakalayo ngakumbi kwaye liya kwandisa ubunzima ngexesha lofakelo. Umdibaniso obanzi wegrout uya kunceda ukunciphisa umahluko phakathi kweethayile. Kungcono ukuseta ngokudibeneyo i-grout yakho ubuncinci kwi-1/16 kwaye ubuncinci obucetyiswayo kwiithayile zeplanki yi-1/8.
yimalini intyatyambo yomtshato
Umthi ujonge iithayile yindlela entsha eshushu eshushu, siyathemba ukuba eli nqaku ngandlela ithile likwazisile ngeempawu zomthi ojongwa kumgangatho wethayile kunye nendlela yokuyibeka ngokuchanekileyo.
Ukufumana ezinye izinto ezinxulumene noyilo jonga igalari yethu ye iimilo zethayile Apha.
izimvo zesipho sonyaka omnye wesikhumbuzo
Isinxibo seIndiya somtshato
iyintoni imisebenzi yenceku yambeko
Ixabiso eliphakathi lendawo yomtshato
Izipho zeminyaka eli-12 kuye
Izimvo zomtshato wasebusika kuhlahlo-lwabiwo mali